A na-aza akwụkwọ ịkpọ oku maka mwepụta nke 7 Galaxy Note | Gam akporosis
N’ọnwa Ọgọstụ anyị nwere ọhụụ nwere Galaxy Cheta na afọ a agafeela aha Rịba ama 7 kama Rịba ama 6 nke ahụ ga-abụ ihe kachasị mma ịnweta ise dị ka nke ikpeazụ wepụtara. Bọchị august Achọworị ka ọ ghara ịbịaru nso ụbọchị mgbe Apple ga-eweta iPhone ọhụrụ ya yana nke Samsung ga-egwu kaadị ya dịka ọ mere kwa afọ.
Ihe onyonyo ahụ leaked dere ederede "Ọnụ na-esote bụ n'akụkụ nkuku", nke na-egosi na anyị ga-adị n'ihu ngwaọrụ ihu n'ihi na ihe ga-abụ Galaxy Note 7. Ọzọ site na ọnụ a enwere ịkọ nkọ banyere ihuenyo ya dị ka S7 ihu, ọ bụ ezie na na Galaxy Note ọ ga-ebu ibu ka ọ na-eme na usoro a nso na phablets.
Ya mere, anyị na-echigharịkwuru ajụjụ ndị ọzọ metụtara ma n'oge a anyị ga-ahụ nsụgharị abụọ nke Nkọwa 7 ka ọ na-eme na Galaxy S7. Nke a bụ na ị ga-enwe ike ịnweta ụdị nsụgharị ma ọ bụ ụdị nke ọkọlọtọ dị ka Galaxy Note 5. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-adị obere maka onye na-emepụta Korea nzọ na nsụgharị abụọ mgbe usoro isiokwu a na-mgbe na-abịa dị ka nke a. Ya mere, anyị nwere ike ịkụ nzọ na ụdị nke ụdị ahụ nwere ike ọ bụ naanị otu anyị hụrụ.
Oyiyi bu akwụkwọ ịkpọ òkù gọọmentị na-akpọ August 2 Dị ka ngosi nke ọhụrụ Galaxy Note 7, ọnụ na anyị kwesịrị ịhụ ụfọdụ obere mgbanwe na imewe ga-emeghe ọnụ ụzọ na-eru nso ọzọ Galaxy S8 na nke ọ bụ ugbu a oge maka Samsung na-egosi anyị ndị ọzọ uche na visual na-agwụ. Agbanyeghị, dị ka ahịa ị na-enweta na Galaxy S7, na obere ihe ị na-eme iji weta ihe dị iche, ọ ga-ezu iji kpalie ahịa nke ndị ọhụrụ ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Leaked ihe onyonyo nke ihe omume maka August 2 maka Samsung Galaxy na-esote